Ciidamda AMISOM Gaar ahaan Kuwa Kenya Iyo Al-shabaab Oo Dalaal Ku dhexmaray Gobalka Gedo – STAR FM SOMALIA
Dagaal u dhaxeeyay ciidamada Shabaab iyo ciidanka Kenya ee howlgalka Amisom qaybta ka ah, ayaa saaka aroortii wuxuu ka dhacay Gobolka Gedo ee Koonfurta dalka Somaliya.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay, kadib markii Al Shabaab ay jidka u galeen Kolonyo ciidanka Kenyatiga ah oo ku socdaalayay inta u dhaxeysa deeganada Dhamase iyo Ceel Cadde oo ka tirsan Gobolka Gedo.
Xoogaga Shabaab ayaa ciidamada Kenya mar qura rasaas ku bilaabay, waxaana taasi ay keentay ciidamada Kenyatiga inay isdifaacaan oo ay dagaalamaan, iyadoo dadka deegaanka ay sheegayaan dagaalka inuu ahaa mid culus oo dhinacyada si adag ay u dagaalameen.
Ciidamada Kenya ee weerarka gaadmada ah lagu qaaday ayaa la soo sheegayaa dagaalkaasi in khasaaro lagu gaarsiiyay, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in Xoogaga Shabaab ay gubeen hal gaari oo ka mid ahaa gaadiidkii ay wateen ciidamada Kenyatiga.
Deegaanka Likori, ayuu si gaar ah dagaalkaan kaga dhacay, sidoo kale ciidamo kale oo Shabaab ka tirsan ayaa jidka u galay ciidan gurmad ah oo ka yimid dhanka Ceel Cadde una socday ciidamada dagaalka uu ku qabsaday deegaanka Likori, ciidankaan gurmadka waxa ay ka tirsan yihiin kuwa Amisom, gaar ahaan ciidanka Kenya.
Saraakiisha ciidamada Dowladda ee aaga Ceel Cadde oo aan la xiriirnay ayeeysan inoo suuragelin inaan helno, si aan wax uga weydiino dagaalkaan culus ee saaka ciidamada Kenyatiga ku qabsaday inta u dhaxeysa Ceel Cadde iyo Dhamase.
Shabaab ayaa weerarada jidka galka noocaan oo kale ah u dhiga ciidamada Kenyatiga ah ee jooga Gobolka Gedo.
Magaalada Muqdisho Oo laga Dareemayo Qabanqaabada Shirka Wada Tashiga Doorashada 2016